Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Agaasimaha Fulinta Cusub ee Ku -meelgaarka ah oo hoggaamin doona TPDCo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Agaasimaha cusub ee ku meel gaarka ah ee TPDCo Georgeia Robinson
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa maanta la tashaday Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda, Jennifer Griffith, iyo Guddiga Agaasimayaasha Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo).
Guddigu wuxuu magacaabay Georgeia Robinson oo hadda ah Agaasimaha Adeegyada Shirkadaha inuu u gudbo jagada Agaasimaha Fulinta Ku -meelgaarka ah.
Mr. Lionel Myrie, oo hadda ah Agaasimaha Horumarinta Wax -soo -saarka iyo Dalxiiska Bulshada, ma qabanayo xilka ku -meel -gaarka ah.
Qorista Agaasime Fulineed oo joogto ah oo cusub ayaa la soo gabagabayn doonaa bishan.
Wada -tashigaas ka dib, Guddigu wuxuu magacaabay, Georgeia Robinson, Agaasimaha Adeegyada Shirkadaha ee TPDCo, Agaasimaha Fulinta Ku -meelgaarka ah ilaa qorista Agaasime Fulineed oo cusub la soo gabagabeeyo bishan.
Mr. Lionel Myrie, Agaasimaha Horumarinta Wax -soo -saarka iyo Dalxiiska Bulshada, ma qabanayo xilka Agaasimaha Fulinta Ku -meelgaadhka ah.
The Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo) waa wakaaladda dhexe ee ay Dawladda Jamaica u igmatay inay fududeyso dayactirka, horumarinta iyo kobcinta badeecada dalxiiska. TPDCo waxay shaqaynaysay ilaa Abriil 5, 1996, waxayna u diiwaangashan tahay shirkad gaar loo leeyahay oo hoos timaada Wasaaradda Dalxiiska. Guddiga Agaasimayaasha ayaa kormeera siyaasadaha shirkadda iyo qorshayaasha istiraatiijiyadeed. Agaasimaha Fulintu wuxuu u warramayaa Guddoomiyaha Guddiga wuxuuna xiriir shaqo la leeyahay Wasiirka Dalxiiska iyo Xoghayaha Joogtada ah ee Jamaica Wasaaradda Dalxiiska.
Shirkadda waxaa loogu talagalay inay ka taageerto dowladda iyo hay'adaha dowladda ee ku hawlan horumarinta warshadaha dalxiiska, gaar ahaan isku-duwidda iyo fududeynta tallaabo degdeg ah oo u dhexeeya danaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Xubnaha Guddiga TPDCo waxaa laga soo xulay qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaana ka mid ah wakiillada Jamaica Hotel & Tourist Association (JHTA), Jamaica Association of Villas and Apartments (JAVA) iyo goob kasta oo loo tamashle tago. Guddoomiyaha TPDCo waxaa magacaaba Dowladda.
Si loo fududeeyo kala-duwanaanshaha, horumarinta iyo hagaajinta badeecada dalxiiska iyadoo la adeegsanayo shaqaale khibrad leh oo tayo leh si kor loogu qaado waayo-aragnimada booqdaha iyadoo la dhisayo is-afgarad iyo isbahaysiyo istiraatiiji ah oo lala yeesho daneeyayaasha warshadaha si loo kobciyo kobaca dhaqan-dhaqaale. Shirkadda Horumarinta Wax -soo -saarka Dalxiiska ee Xaddidan (TPDCo) waa hay'adda dhexe ee ay Dawladda Jamaica u igmatay inay fududeyso dayactirka, horumarinta iyo kobcinta badeecada dalxiiska.
TPDCo, oo ah shirkad horumarisa waxsoosaarka heer caalami ah oo gacan ka geysata wax soosaarka dalxiiska ee la wanaajiyay iyo waayo -aragnimada booqdaha, taasoo dhalisay tayada nolosha oo hagaagsan dhammaan dadka reer Jamaica.